Isivumelwano esitsha esigqwesileyo sibethelela i-samsung galaxy s20 fe 5g yexabiso ukuya kwi- $ 400 nje
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isivumelwano esitsha esigqibeleleyo sibethelela ixabiso le-Samsung Galaxy S20 FE 5G kwi-400 nje ye- $
Isivumelwano esitsha esigqibeleleyo sibethelela ixabiso le-Samsung Galaxy S20 FE 5G kwi-400 nje ye- $
Ngaphandle kokubi kakhulu kwaye Imicimbi yescreen esipapashiweyo ukuba i-Samsung yayingenakho ukulungisa nge-software ezahlukeneyo, uhlaziyo lwe- I-Galaxy S20 FE ithengiswa ngathi yi-hotcakes Ngexesha lokuqala kwiinyanga zokuqala zokufumaneka kokubini kunye nakwilizwe liphela.
Ayifikeleleki ngokwaneleyo (xa kusungulwa) ukwenza uluhlu lwethu olubanzi lwee Eyona fowuni ibhajethi ye-5G Ngokujikeleza, indawo yamandla eSnapdragon 865 iyafikeleleka ngexabiso eliphantsi kwaye ingabizi kakhulu, ngakumbi ukuba awunangxaki ekuthengeni imodeli ethile yenethiwekhi kwisicwangciso sokuhlawula isixhobo.
Ukuthenga okungcono, umzekelo, kunokutsala I-AT & T. Ababhalisi kunye ne-128GB yokugcina eyahlukileyo kwindawo eyi- $ 400 endaweni ye- $ 700 okanye uluhlu lwamaxabiso. Ngokucacileyo iiapos azinyanzelisi njenge simahla I-Galaxy S20 FE iyunithi, kodwa ukungangqinelani kwesi sivumelwano ngokufanelekileyo kuya kuhlala ixesha elide ubuncinci kuneVerizon & apos;
I-Samsung Galaxy S20 FE
I-5G, i-128GB, i-AT kunye neT
$ 8 icinyiwe (43%)$ 11Shumi elinanye / mo$ 19Isine Thenga kwiBestBuy
Ifumaneka kwi-Cloud Navy, Cloud Mint, kunye ne-Cloud Lavender hues, isaphulelo Isamsung I-Galaxy S20 FE 5G inokuba yeyakho ngentlawulo encinci kakhulu ye- $ 11.11 ngenyanga kangangeminyaka emithathu ngaphandle kwesidingo sokurhweba nantoni na ngaphakathi okanye izibuko kwinombolo yefowuni esele ikho evela kumphathi owahlukileyo.
Kwimeko apho uzibuza, i-AT & T isabiza i-19.45 yeedola epheleleyo ngexesha lokubhalwa kwayo, efikelela kwi- $ 699.99, ngelixa ivuliwe i-Galaxy S20 FE 5G inguqulelo eyehla yaya kuthi ga kwi-479 yeedola ngexesha Inkulumbuso 2021 Imibhiyozo engaphantsi kweveki edlulileyo ikwabuyiselwe kwixabiso layo rhoqo kwiAmazon.
Okukwintsusa, wena neapos ujonge ukugcina i-300 yeedola eqinileyo xa kuthelekiswa nabanye abathengisi kwi-Best Buy okwangoku kwisiphatho sesandla esiphezulu esine-120Hz esibonisiweyo, kunye neekhamera ezintathu ezijonge ngasemva, kunye Ubungakanani bebhetri ye-4,500mAh exhasa ubuchwephesha obukhawulezayo kunye netekhnoloji yokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ukuba ufuna esinye isizathu sokugqibela sokuthenga i-Galaxy S20 FE 5G, kuya kufuneka sikukhumbuze ukuba I-Galaxy S21 FE kungenzeka ukuba ayizi kwakamsinya ... okanye banzi kakhulu .
vula usetyenziso lwe-facebook kwisikhangeli
moto e xt830c vula i-bootloader
galaxy s10 kunye net mobile
Ungazicima njani iifayile kunye nezalathiso kwiJava
I-Samsung Galaxy Express Prime 3 ye-AT & T ibonisa ukuhanjiswa ngokusemthethweni
Eyona moto inyukayo, iifowuni kunye nezitulo (2021)
Isamsung isonga ukusasazwa kwayo kwe-US 11 ye-Galaxy S20 FE
Uvavanyo lweAlcatel OneTouch Pop 7
Ekugqibeleni! Gweba phantsi iNqaku 8 okanye i-S8 yesaziso kwimivalo ukusuka naphi na kwiscreen
Izixhobo zeApple ngaphandle kwe3D Touch ngoku zinokusebenzisa imowudi yokulandelela ukuze ubeke ngokuchanekileyo isikhombisi sokuhlela